Oromo News 03.26.2021 | KWIT
Varient haaroyni south Africa fi namni 5 ammoo California kan argameedha. Varient UK kan dabalatuudha, namni 14 South Dakota keessati kan argamuudha. Jiraattota South Dakota 228,000 ta’an talaali corona virus kan jalqabaa argatanii jiran.
Deparmantiin mana Fayyaa Iowa akka guyyaa har’aa gabaasetti namni haarawa Covid-19 due 6 yoo tau haarawa kan qabame ammo 633 dha. Jiraattoni Iowa 334,000 kan ta’an talaali corona virus kan jalqabaa fudhatani akka jiran himan. Woodbury County keessati, namni haarawa seaati 24 keessati qabame 32 dha.
Deparmantiin mana fayyaa Siouxland akka gabasanitti bakkeewan talaali itti kennaman kaluu kanatt kan jijjiiru ta’a. jia April tiif, County clinica kanniin Siouxland Expo Center kan qopheesu ta’a. hanga ammaati clinici talaali itti godhan Tyson kan deemama jiruu yoo tau director paari fi bakka haara galfannaa kan ta’an Matt Salvatore akka jedhetti jia dhuftu irraa jalqabee qophiin dabalataa kan achitti qopheesuf yaalame akka jiru himan, bakkee jijjiiru sababa kan qabaniidha.
Floyd Valley Healthcare nama kamuufu umriin isaa 18 fi sanii ol kan taeef talaali Covid-19 kennuudhaf banu jiru. Hospitaali LeMars gabaasa kamsaa baasen himee jira.